Abapapashi bavumela iAdtech ukuba ibulale izibonelelo zabo | Martech Zone
Iwebhu yeyona nto inamandla kwaye inamandla okudala ikho. Ke xa kuziwa kwintengiso yedijithali, ubuchule bokuyila kufuneka bungabi namda. Umpapashi kufuneka, kwithiyori, akwazi ukwahlulahlula ngokupheleleyo izixhobo zakhe zemithombo yeendaba kwabanye abapapashi ukuze aphumelele ukuthengisa ngokuthe ngqo kunye nokuzisa ifuthe elingalinganiyo kunye nokusebenza kumaqabane akhe. Kodwa abayenzi- kuba bajolise kwinto itekhnoloji yentengiso ethi abapapashi mabayenze, hayi izinto abanokuzenza ngokwenyani.
Cinga ngento elula njengopapasho lwephephancwadi olubengezelayo. Uwathatha njani amandla kwiphepha elipheleleyo, intengiso yemagazini ecwebezisiweyo kwaye uzise amava afanayo ukubonisa intengiso? Mhlawumbi azikho iindlela ezininzi zokwenza oko ngaphakathi kwemida ye Iiyunithi zentengiso ezisemgangathweni, umzekelo.
Itekhnoloji yentengiso iguqukile kwintengiso kunye nokuthengisa kule minyaka ilishumi idlulileyo. Iiplatifomu zenkqubo zenze ukuthengisa kwidijithali kwisikali kwaba lula kunangaphambili. Inezinto zayo eziphakamileyo, ikakhulu iiarhente kunye nomgaqo wobugcisa wentengiso. Kodwa kule nkqubo, kunqamle ubuchule obuninzi kunye nefuthe amaphulo entengiso ebesaziwa ngaphambili. Unokulingana kuphela amandla amakhulu okufaka uphawu kuxande oluphakathi okanye kwibhodi yabaphambili.
Ukuhambisa imikhankaso yedijithali kwisikali, itekhnoloji yentengiso ixhomekeke kwizithako ezibini ezibalulekileyo: ukubekwa emgangathweni kunye nokwenza imveliso. Zombini zithintela ukusebenza kunye nobuchule bokwenza intengiso yedijithali. Ngokunyanzelisa imigangatho engqongqo kubukhulu bokudala kunye nezinye izinto eziphambili, itekhnoloji yentengiso iququzelela imikhankaso yedijithali kwiwebhu evulekileyo. Oku kunyanzelisa ukwenziwa kwempahla kwi-inventri yokubonisa. Ukusuka kwimbono yohlobo, lonke uluhlu lwempahla lungaphezulu okanye ngaphantsi ngokufanayo, ukonyusa ubonelelo kunye nokuqhuba kwemali yomshicileli.
Isithintelo esisezantsi sokungena kwindawo yokupapasha yedijithali kukhokelele kuqhushumbo lwempahla yedijithali, isenza ukuba kube nzima ngakumbi ukuba iimveliso zihlule phakathi kwabapapashi. Iindawo zeendaba zasekhaya, iisayithi ze-B2B, iisayithi ze-niche, kunye neebhloko ukukhuphisana neenkampani ezinkulu zosasazo wentengiso yeedola. Inkcitho yentengiso isasazeke icekeceke, ngakumbi emva kokuba abarhwebi bethathe ukuluma kwabo, kuyenza nzima i-niche kunye nabapapashi abancinci ukuba baphile- nokuba banokuba ngcono, bejolise ngakumbi kulwalamano olunikiweyo.
Ngelixa behamba kumanyathelo okutshixa ngetekhnoloji yentengiso, abapapashi banikezele ngoncedo olukhulu ababenalo kumlo wengeniso yentengiso: Ukuzimela okupheleleyo kwiiwebhusayithi kunye neekiti zeendaba. Uninzi lwabapapashi alunakuthetha ngokunyanisekileyo ukuba kukho nantoni na malunga neshishini labo, ngaphandle kobungakanani babaphulaphuli babo kunye nokugxila kokuqulathiweyo, okwahlula oko.
Umahluko ubalulekile kulo naliphi na ishishini 'eliyimpumelelo kukhuphiswano; ngaphandle kwawo, amathuba okusinda amfiliba. Oku kushiya izinto ezintathu ezibalulekileyo kubapapashi kunye nabathengisi ukuba baqwalasele.
Kuza kuhlala kukho isidingo esiMandla sokuThengisa ngokuthe ngqo -Ukuba iimveliso zifuna ukuhambisa amaphulo aphezulu kwi-intanethi, kuya kufuneka basebenze ngokuthe ngqo nompapashi. Umpapashi ngamnye unamandla okuququzelela amaphulo angenakho ukurhweba kuwo kwiwebhu evulekileyo. Izikhumba zesiza, ukuhla, kunye Umxholo ophawulweyo ezinye zeendlela zoburhabaxa ezenzeka ngoku, kodwa ubukho bezinto onokuzikhetha ngokuqinisekileyo ziya kwanda kule minyaka izayo.
Abapapashi beSavvy bayakufumana iindlela zokwandisa iminikelo yokuyila -Abapapashi abakhaliphileyo abayi kulinda i-brand ukuba ixhase imibono yeempembelelo eziphezulu. Baza kuthi ngenkuthalo baxoxe ngezimvo ezintsha, kwaye baya kufumana iindlela zokuzisebenzisa kwiikiti zabo zemithombo yeendaba kunye neepaki. Iindleko zeli phulo lokuphunyezwa ngokungathandabuzekiyo ziya kuza kwipremiyamu, kodwa ukongeza kwii-ROI eziphezulu, iindleko zala maphulo ziya kuthi ekugqibeleni zihanjiswe. Naphi na apho kukho ithuba lokunciphisa iindleko kwimarike, umboneleli ngenkonzo ophazamisayo uya kuthi ekugqibeleni angenelele.
Abapapashi kunye nabathengisi baya kuzifumana iindlela zokuHambisa iiPhulo eziPhezulu eziPhezulu ngamaXabiso asezantsi -Ayinguye wonke umpapashi okanye uphawu olunoluhlahlo-lwabiwo mali lokudala imikhankaso yesiko. Xa besenza, kunokubakho iindleko ezingalindelekanga zokuyila kunye nophuhliso. Ekuhambeni kwexesha, iinkampani zangaphandle zokuyila ziya kufumana iindlela zokuphelisa ezo ngxaki ngokuphucula iindlela zokuyila ezinokuthi zithengwe ngabapapashi kunye nabathengisi ukuze basebenzise uhlobo lwempembelelo kunye nokusebenza abaya kuba nzima ukufikelela kuko.
Ukuzincama ngokuzimela ukuze uqubude kuAdtech sisiphakamiso esilahlekileyo
Amaxabiso aphezulu okucofa, i-ROI, kunye nefuthe lophawu lwento zonke zichaphazeleke kakubi ngumgangatho kunye nokuthengiswa kwempahla efunekayo ukwenza umsebenzi wentengiso kwinqanaba. Oko kushiya amathuba amatsha apapashiweyo kunye nabathengisi ekubuyiseni ubuchule kunye nempumelelo eyayikade inabo.
Abaxhasi be-tech tech ngokuqinisekileyo baya kuthi Inkqubo yentengiso yinto engenakuphepheka kwaye iyinto entle kubapapashi nakubathengisi ngokufanayo kuba yehlisa iindleko zentengiso kwaye inike abapapashi abaninzi isiqwenga sepayi. Imigangatho yimfuno zobugcisa zokwenza loo msebenzi.
Akuthandabuzeki ukuba abapapashi (abo basamile nangoku), bangavuma ngentliziyo yonke. Impumelelo ka-Adtech ubukhulu becala ibikukushicilela ububi. Kodwa kuxhomekeke kubapapashi abafanayo ukufumana iindlela zokulwa ngokucinga kwakhona ngendlela yabo kwintengiso yentengiso.
tags: amaphulo entengisochitha intengisoiiyunithi zentengisoyongezaabakhangisiiteknoloji yokuthengisaIABInkqubo yentengisoUbungakanani beentengiso eziqhelekileyoubungakanani bokubonisa obuqhelekileyo